भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश, सरकार के गर्ला ? « GDP Nepal
भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश, सरकार के गर्ला ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
प्रकाशित : ४ जेष्ठ २०७८, मंगलबार